China Lithium Bromide Absorption Technology ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya | SHUANGLIANG ECO-ENERGY
Absorption Chiller / Okpomọkụ mgbapụta
Electric Chiller / Okpomọkụ mgbapụta
Ikuku Ikuku Ikuku Ikuku / Mkpọrọ Igwe jụrụ
Waterdị Mmiri Na-ekpo Ọkụ
Luedị Gas Flue
Absorption Okpomọkụ mgbapụta
Magnetik Iburu Centrifugal Chiller
Mmiri-mma Centrifugal Type Chiller / Heat Pump
Deep Oghere Butt ịgbado ọkụ Okpomọkụ Exchanger
Coiled tube Okpomọkụ Exchanger
Ugboro abụọ tube mpempe akwụkwọ Okpomọkụ Exchanger
Nchekwa Okpomọkụ Exchanger
TEMA Okpomọkụ Exchanger
Inter ogbo oyi maka Compressor na imu ohuru okpomọkụ
Ọgụgụ isi na-achịkwa nchara struture usoro jụrụ oyi
Usoro ikuku ikuku ikuku ikuku (ACC)
Indirect ciment ụlọ elu akọrọ jụrụ usoro
Mmiri na-azọpụta & anwụrụ abatement usoro akọrọ jụrụ
Teknụzụ nnabata Lithium Bromide
Shuangliang nwere ihe karịrị 30,000 nchekwa nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi na arụ ọrụ siri ike gburugburu ụwa, kesaa n'akụkụ dị iche iche dịka azụmahịa, ụlọ ọrụ ọha na eze, ụlọ ọrụ, na ngwaahịa ndị ahụ na-ebupụ karịa mba 100 na mpaghara gburugburu ụwa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 40 nke ahụmịhe na R&D na n'ichepụta ngwa ọrụ nchekwa
Large-n'ọtụtụ friji / okpomọkụ mgbapụta akụrụngwa R&D na n'ichepụta isi
Soro na Nwa nke China lithium bromide absorption chiller / heat pump pump national standard
Nnukwu ikuku ikuku na ụlọ ọrụ na-eduga COP
Shuangliang nwere ihe karịrị 30,000 nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi na arụ ọrụ kwụsiri ike gburugburu ụwa, kesara n'akụkụ dị iche iche dịka azụmahịa, ụlọ ọrụ ọha na eze, ụlọ ọrụ, na ngwaahịa ndị a na-ebupụ karịa 100 mba na mpaghara gburugburu ụwa.
Atụmatụ nke Ahịa
Ejirila nkà na ụzụ na-eduga iji hụ na
arụmọrụ dị elu nke chiller
1. 1. Mgbapụta abụọ na enweghị Spray Nozzles
Ndokwa aka ekpe-Middle-Right: absorber-evaporator-absorber;
Absorbers na dripping efere kama ịgba nozzles;
Zere mbelata nke ike jụrụ oyi;
Ogologo oge ọrụ nke chiller.
2. Nkesa nke Refrigerant site na Dripping efere na Evaporator
Oru oma itinye n'ọrụ nke okpomọkụ nyefe ebe;
Belata ihe ọ filmụ filmụ ihe nkiri mmiri;
Melite arụmọrụ arụmọrụ;
Belata ike oriri nke igwe mgbapụta.
3. Akwa Tubes na Kachasị Mma ndokwa na Evaporator
Gbaa mbọ hụ na ọbụna nkesa mmetụta ntụgharị okpomọkụ;
Mee ka ntụgharị ikpo ọkụ dịkwuo elu.
4. Okpomọkụ Nyefee Technology
Gbaa mbọ hụ na ọrụ dị nchebe na ịgbatị usoro ndụ;
Nrụpụta ọkụ ikpo ọkụ ka elu nke 93.5%.
5. Anti-kefriza Technology
A na-echebe tubụ ndị na-eme ka mmiri ghara ịjụ oyi. A na - amata ya site na ichota mmiri nju oyi site na condenser na ulo ala nke evaporator, wee tinye ya na efere nta. Ya mere, a ga-akwụsị usoro nsacha mmiri refrjiraeto ma ọ bụrụ na agbanyere mgbapụta refrjiraeto.
6. Serial Flow nke Ngwọta
Enweghi ike site na mkpuchi ma belata corrosion;
Melite pụrụ ịdabere na-aghọta kpọmkwem akara nke chiller.
Ikuku ikuku nke ngwa nchacha nke edoziri n'ime nkeji iji hụ na arụ ọrụ ikuku kacha mma.
8. Non-condensable Gas Auto Ihapu System
Ejikwa mmalite na nkwụsị nke valvụ solenoid nke arụ ọrụ site na nrụgide dị elu na obere nrụgide nke cylinder akpaaka na-arụ ọrụ, si otú mmalite mmalite / nkwụsị nke mgbapụta mgbapụta na ikuku gas na-emezu.
9. SL Ime
A na-ewu usoro nlekota oru nlele anya nke SL dabere na Shuangliang dị na sava, ndị ọrụ nwere ike ịga na weebụsaịtị webụsaịtị nwere akaụntụ ziri ezi na ndekọ ederede iji lelee ozi chiller.
Ọrụ: nchịkọta data, nlekota ntanetị, nchekwa data na njikwa, nyocha data na nyocha ndị ọkachamara, ịdọ aka ná ntị mmalite na ịdọ aka ná ntị mkpu.
Teknụzụ ndị a niile na-eme ka ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, nke a pụrụ ịdabere na ya ma dị mfe.
Nke gara aga: mmiri na-azọpụta & anwụ anwụ abatement akọrọ jụrụ usoro
Osote: Electric Chiller na Okpomọkụ mgbapụta Technology
Akwụkwọ Lithium Bromide Absorption Chiller
Lithium Bromide Absorption Okpomọkụ mgbapụta
Ikuku Njikere Igwe Na-echekwa Mmiri
Electric Chiller na Okpomọkụ mgbapụta Technology
High arụmọrụ Okpomọkụ Nyefee System
Adreesị: NO. 88 XILI ụzọ, LIGANG, JIANGYIN, JIANGSU, CHINA
Ekwentị: + 86-510-86638822
Shuangliang meriri TUAS IWMF Garbage Pow ...
ỌZỌ na-eweta ihe ịga nke ọma SHEL & TUBE ...
Mmekọrịta miri emi n'etiti Shuangliang na ...
Akesa ike onyinye
Ulo oru 500 nke onwe